Dr BENESSY : Lasa mpikarama an’adin’ny fitondrana Hvm aty amin’ny faritra Atsinanana
Ny alahady lasa teo, nanatanteraka fandaharana manokana tao Toamasina, ny fandaharana Don-dresaka karakarain’ny fahitalavitra tsy miankina Tv Plus Madagascar. 7 mars 2018
Anisany vahiny nasaina tamin’izany ny loholon’i Madagasikara voafidy tamin’ny lisitra Hvm, Dr Benessy Harison Sébastien. Ity farany izay niaro fatratra ny fitondrana Rajaonarimampianina. Ao anatin’ny tanjany sady mamiratra ny Hvm, hoy Benessy.
Tokony hovaina ho « Hery vaovao sady mamiratra ho an’i Madagasikara » mihitsy ny anaran’ ny antoko. Tsy te-hahalala ny fijaliana mahazo ny vahoaka malagasy mihitsy ity mpanao politika ity. Momba ny vidim-bary, dia nailiny any amin’ny mpanararaotra ny fiakaram-bidin’io foto-tsakafon’ny Malagasy io. Mahakasika ny delestazy indray, tsy misy intsony izany, hoy ny loholona Benessy. Teny izay azo ambara fa fanaovana tsinontsinona ny vahoaka Malagasy. Ny tanànan’i Toamasina misy azy izay mbola anjakan’ny delestazy lavareny.
Lasa mpikarama an’adin’ny Hvm tanteraka ny loholona Benessy. Ity mpanao politika sady tale jeneralin’ny orinasa Omsi (Organisation médico- sanitaire interprofessionnelle) ity izay miezaka mifikitra mafy amina seza politika. Raharaha maro momba ny fitantanana ny Omsi no maha voatonontonona ny anarany, ka ny fifikirana eo amin’ ny seza amin’ny alalan’ny fanohanana ambokony ny fitondrana Hvm no hitany fa fomba mety indrindra mba tsy hampipoaka ireo raharaha maha voatonontonona ny anarany.
Nahagaga ny mpanaraka fandaharana ihany koa ny fanenjehan’i Dr Benessy ny fitondrana tetezamita notarihin’ny filoha Rajoelina. Tao anatin’ny fandaharana io ihany, dia nahitsin’ny solontena Mapar Jean Maurice i Dr Benessy fa tsy hita teo amin’ny tontolo politika raha tsy tamin’ny andron-dRajoelina. Izy izay notendren’ny filoha Rajoelina ho CT tamin’ izany fotoana izany.
Ino Vaovao Toamasina